Permalink Reply by winsithu on October 19, 2015 at 16:30
Ko Ko can beat Aung Aung in tennis with (easy).ခုလိုစာ​ကြောင်းများမှာဆိုရင်​ -ness​ပေါင်းပြီးnoun ပုံစံ​ပြောင်းရမလား easeပဲထည့်​ရမလားခင်​ဗျာ။ဘာ​ကြောင့်​ထည့်​ရသလဲဆိုတာလဲသိချင်​ပါတယ်​။ အခြားဥပမာ​တွေလဲသိချင်​ပါတယ်​။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on November 3, 2015 at 17:27
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းကို ဆရာများအား ပြသထားပါတယ်။
Permalink Reply by Myo Htet on October 19, 2015 at 19:33
Ethyl alcohol is produced mainly by fermentation of molasses, which are produced asaby-product in sugar industries.
In above sentence, which word is modified by 'which' ? Ethyl alcohol or molasses?
If comma is removed, how will the meaning of this sentence turn to?
Reply me, please.
Permalink Reply by smilesmile smile on October 20, 2015 at 20:53
Let me know about Bussiness & Marketing.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on November 3, 2015 at 17:30
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးနှင့် သင်ခန်းစာများကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Khin Myo Aey on November 9, 2015 at 17:00
I would like to know "Be" usage as wide as.
Permalink Reply by Zaw Winn Maung on November 25, 2015 at 22:31
Let me know the usage of 'so' and 'such'
as wide as.
Permalink Reply by hnin htet ei on November 26, 2015 at 9:29
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 6, 2016 at 16:52
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆေးပညာနှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများကို ဤဝက်ဗ်ဆိုဒ်တွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။